A ekpere ịmata nzube nke ndụ gị | EKPERE NA OZI
Ekpere iji mara nzube nke ndụ gị
Chineke nke udo, Onye mere ka Onye-nwe-ayi Jisus, Onye-ọzùzù aturu nke ndi nwuru anwu bilite, site n'ọbara nke ọb covenantub bya-ndu ebighi-ebi, nye unu ezi ihe nile nke unu onwe-unu n canme, ime ya nke di nma n'anya-Ya, site n'aka Jisus. Kraist, Onye otuto diri rue mb ande nile ebighi-ebi. Amen. ”- Ndị Hibru 13: 20-21
Nzọụkwụ mbụ iji chọpụta nzube anyị bụ inyefe. Nke a bụ ihe na-emegide ụkpụrụ nyere ọdịdị nke ọtụtụ akwụkwọ enyemaka onwe onye taa. Anyị chọrọ ime ihe; iji mee ka ihe mee. Ma ụzọ ime mmụọ dị iche na nke a. Robert na Kim Voyle ndị ọkachamara n'ịkụzi ọrụ na ịkụzi ndụ dere, sị: “Ndụ gị abụghị ihe ị nwe. Ọ bụghị gị kere ya, ọ bụghị gị ga-agwa Chineke, ihe o kwesịrị ịbụ. Agbanyeghị, ịnwere ike ibilite na ekele na ịdị umeala n'obi maka ndụ gị, chọpụta ebumnuche ya ma gosipụta ya n'ime ụwa “. Iji mee nke a, anyị kwesịrị ịnabata ụda olu dị n’ime na Onye Okike anyị.
Bible na-ekwu na Onye Okike anyị ji nzube na nzube kee anyị. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna, eleghị anya ị hụwo ihe àmà siri ike nke a. Canmụaka nwere ike igosipụta ụdị omume dị iche na nke ha karịa nke ị zụlitere. Anyị nwere ike ịzụlite ụmụ anyị niile otu, ma ha nwere ike ịdị iche. Abụ Ọma 139 gosipụtara nke a site n'ịgba akaebe na Onye Okike anyị Chineke nọ n'ọrụ iji mepụta atụmatụ maka anyị tupu amụọ anyị.
Onye edemede Christian bụ Parker Palmer ghọtara nke a ọ bụghị dịka nne na nna, kama dịka nna nna. Uniquezọ dị iche iche nwa nwanne ya nwanyị na-eju ya kemgbe amụrụ ya wee kpebie ịmalite ịdekọ ha n'ụdị akwụkwọ ozi. Parker nwere nkụda mmụọ na ndụ nke ya tupu ọ banyeghachi na nzube ya ma achọghị ka otu ihe ahụ mee nwa nwa ya. N’akwụkwọ ya bụ́ Life Your Speak: Ige Ntị maka Voice of Vocation, ọ kọwara, sị: “Mgbe nwa nwa nwa m ruru ihe dị ka afọ iri abụọ ma ọ bụ ihe dị ka afọ iri abụọ, aga m ahụ na akwụkwọ ozi m ruru ya, jiri okwu mmalite yiri nke a: Nke a bụ eserese nke onye ị bụ site na nwata oge ụwa a. Ọ bụghị onyinyo doro anya, naanị ị nwere ike ịdọrọ ya. Mana ọ bụ onye hụrụ gị n’anya nke ukwuu wee dee ya. Ikekwe ndetu ndị a ga - enyere gị aka ibu ụzọ mee ihe nna nna gị mere naanị mgbe e mesịrị: cheta onye ị bụ mgbe ị bịarutere ọzọ wee weghachite onyinye nke ịbụ ezigbo onye.
Ma ọ bụ nchọgharị ọzọ ma ọ bụ ụdị mgbanwe ọ bụla, ndụ ime mmụọ na-ewe oge iji chọpụta ma nyefee mgbe ọ bịara ibi ndụ na nzube anyị.
Ka anyị kpee ekpere ugbu a maka obi ịtọgbọ:
Ana m enyefe ndụ m n’aka gị. Achọrọ m ime ihe, mee ihe mee, jiri ike m niile, mana ama m na ewezuga gị enweghị m ike ịme ihe ọ bụla. Amaara m na ndụ m abụghị nke m, ọ dịịrị gị ka ị rụọ ọrụ site na m. Jehova, enwere m obi ekele maka ndụ a nke ị nyere m. Have gọziwo m dị iche iche onyinye na talent. Nyere m aka ịghọta ka m ga -esi zụlite ihe ndị a wee wetara aha ukwu gị otuto.
Nke gara aga Post Gara aga post:Akụkọ banyere ụbọchị: "akụkọ onye ọ bụla"
Next Post → Post ozo:Ozioma nke taa dị ka Nọvemba 18, 2020 na okwu Pope Francis